Qoys Kenyaan ah oo Hantidooda ku wareejinaya Al-shabab si wiilkooda u helaan. – Hornafrik Media Network
Qoyska Isaac Mbalewa oo ka mid ahaa Ciidamadii Kenya ee 2016kii lagu weeraray Ceel Cadde ayaa hadda ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin in ay bixiyaan dhamaan Hantida ay leeyihiin si ay u helaan wiilkooda oo ku jira gacanta Al-shabaab.
Maalin kaddib markii la qabtay Isaaq, 16kii January 2016,waxaa laga maqlay codkiisa raadiyaha Al-shabaab isaga oo ku baaqaya in wadahadal lala furo Al-shabaab noloshiisana laga badbaadiyo.
Tan iyo xilligaas Ninkan oo leh 4 carruur ah warkiisa iyo wacaalkiisa midna lama helin,waxaana waaliddiinta dhalay ay hadda doonayaan in ay bixiyaan waxkasta oo ay dalbadaan AL-shabaab si loo siidaayo.
“waxaan diyaar u ahay in aan siiyo Al-shabaab waxkasta oo ay doonayaan,haddiiba ay wiilkeyga ii soo celinayaan,xitaa waxaan u iibinayaa dhulkeyga si aan u helo wiilkeyga”ayuu yiri Francis Otsyalo oo ah aabaha dhalay Askarigan.
Warbaahinta Kenya ayaa odaygan ku booqday Gurigiisa,waxaana uu la xanuunsanyahay Cudurrada dhiikarka iyo wadna garaaca oo ku dhacay saddex Sano ka hor,wuxuuna ka wal walsan yahay in uu dhinto isaga oo aan dib u arag wiilkiisa.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayuu ka codsaday in uu faragelin ku sameeyo nolosha wiilkiisa oo uu sheegay in uu ku ogyahay gacanta Al-shabaab,odayga ayaa sheegay in riyo qaldan ama xun uu habeen kasta arko, taas oo ay ka mid tahay in Ciidamada KDF ay aaseen wiilkiisa,hayeeshee marka uu ka koco soo xusuusto hadalkii wiilkiisa ee Raadiyaha Al-shabaab weerarka Ceel Cadde kaddib.
Josephine Otsyalo ,oo ah Hooyada dhashay sarkaalka 51jirka ah ee ka tirsanaa Ciidanka Kenya kuna maqan AL-shabaab ayaa sheegtay in aysan marna joojin Alla bariga,kuna duceysato in wiilkeeda oo nool mar uu indhaha ka qaaddo.
Waxaa ay sheegtay in ay diyaar u tahay iibinta hantideeda qeyb ka mid ah si ay u soo furato wiilkeeda,waxaana ay ku baaqday in arrintaas ciddii fududeyn karta ay ka caawiso.
Dowladda ayey ku eedeysay in qoyskan ay meel cidla ah uga tagtay kaddib markii aysan wax war ah siin tan iyo weerarkii Ceel Cadde ee Al-shabaab ku qaadeen saldhiggii Ciidanka Kenya,halkaas oo 173 Askari lagu dilay.
Markii ugu dambeysay ee uu sarkaalkaas la hadlay waalidkii waxaa ay ahayd ka hor weerarka,waxaana ku xigtay isaga oo Idaacadda Al-shabaab ka hadlaya oo sheegaya in uu doonayo in laga shaqeeyo siideyntiisa Al-shabaabna loo fuliyo waxa ay doonayaan.
Isaac Mbalewa,waxaa uu ka soo jeedaa Qabiilka Kukuyada,markii uu dhameystay waxbarashada waxaa uu galay dugsi macallimiinta lagu diyaariyo,waxaana uu jeclaa waxbaridda,waxaa uu ka baxay Jaamacadda Nairobi,waxaana kaddib uu ku biiray Ciidanka Difaaca Kenya ee KDF oo uu waligiiba ku hamin jiray in uu ka mid noqdo.
Aabihii ayaa sheegay in wiilkiisa uu 2013kii ka codsaday in uu iska casilo shaqada Ciidanka maaddaama uu muddo ku jiray,hayeeshee waa uu diiday,waxaana uu door biday in uu ka sii mid ahaado Ciidanka Kenya.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeezow Oo Siyaasiyiinta Mucaaradka Ah Uga Digay In Ay Lacago Ka Qaataan Dowladdo Shisheeye